Ma Ogtahay Musqusha Musqusha
Bogga ugu weyn / blog / Ma ogtahay sida xun ee musqusha “uraya” u tahay? Raadi Isha saxda ah ee lagu hagaajin karo!
2020 / 10 / 22 Qoondayntablog 1967 0
Ma ogtahay sida ay u xun tahay urta musqusha? Sida lagu sheegay sahanka, urta musqusha iyo urku waxay u badan tahay inay sababaan neefta, boronkiitada, firiiric, iyo cudurada wadnaha iyo cudurada kale ee waaweyn.
Waxa taas ka sii darran ayaa ah in dadku ugu yaraan shan sano noloshooda ku qaataan musqusha, iyaga oo isticmaalaya musqusha in ka badan 15 daqiiqo maalintii, ku dhowaad laba saacadood usbuucii, taas oo u dhiganta shan sano oo noloshooda ah oo ay ku hareeraysan yihiin “gaasas sun ah”, ka fikir oo dhan oo ku saabsan xun!
Waxaa jira afar khaldan oo waaweyn oo ku saabsan Qurxinta Musqusha
Qurxinta musqusha ee soo jireenka ah waxay ka jirtaa afar is faham la'aan weyn, bal aan fiirino.
Quraafaad # 1.
Saamayn Kuma Yeesho Caafimaadka Aadanaha
Qiiqa bini'aadamka ee soo baxa ayaa badanaa ka kooban ammonia, hydrogen sulfide, uric acid iyo gaasas kale oo waxyeelo leh, gaar ahaan hydrogen sulfide, neefsashada muddada-dheer waxay sababi doontaa difaac bina-aadamnimo oo hoos u dhacda, waxay kicineysaa dareenka bina-aadamka urta iyo xubnaha muuqaalka, oo si fudud looga dhigi karo xubinta inaan la jawaabin, kabuubyo, gaar ahaan waayeelka, haweenka uurka leh, carruurta waxyeelo badan.
Caadi ahaan Furan Qiiqa Qiiqa
Cinwaanada Udugga iyo Faddaraynta Bakteeriyada
Mashiinka qiiqa ayaa door ka ciyaari kara bedelka hawada musqusha, laakiin maxaa yeelay marawaxada qiiqa ayaa sareysa, qaar badan oo ka mid ah walxaha culus ee waxyeelada leh iyo walxaha sunta ah looma saari karo sidan: Bakteeriyada guud ahaan waxay kuxirantahay derbiyada, tuwaalada iyo timaha burush iyo waxyaabo kale, ma fududa in laga saaro marawaxada qiiqa dibada.
Waxay baabi’isaa Dhalooyinka Musqusha.
Aromatics-ka iyo udgooneeyeyaasha waxaa loogu talagalay inay daboolaan urka qaaska ah iyagoo sii deynaya caraf udgoon, mana la falgeli karaan gaasaska keena urta gaarka ah, sida ammonia iyo hydrogen sulfide, mana kala daadan karaan ama ka saari karaan gaasaska waxyeellada leh.
Intaa waxaa dheer, aromatikada badankood waxay ka kooban yihiin giraanta benzene, aldehydes iyo walxo kale, isticmaalka muddada-dheer waxay u eg tahay inuu sababo sumoob joogto ah, oo xitaa u horseedo kansar.
Dhaqdhaqaaqa Mindhicirka Uurka
Wax yar oo ka mid ah Qashin-baxa ayaa sameyn doona.
Saxarada, waxaan urineynaa urka saxarada laqaadayo marka urku uu buuxiyo dhamaan suuliga suuliga oo loo qaybiyo musqusha, hadii markan la dhaqo, xilliga duufaantu soo saareyso godka suuliga ee gaaska urta udgoon iyo jeermisyo kaladuwan musqusha iyo si toos ah hawo mareenka aadanaha, xanaaqa neerfaha, waxay si fudud ugu keeni karaan cudur.
Xagee Udgoga Musqusha Musqusha iyo Sidee Looxaliyaa?
1, Source Udgoon:
Gogosha Biyo Mareenada Gogosha
Xidhiidhku waa tuubbada bullaacadda, oo iyaduna caqabad u ah urta iyo cayayaanka yaryar ee duulaya. Maalmahan, waxaa jira qashin-saarid dabaq ah oo nooca U-iyo T ah. Tuubada dhulka ee nooca u-qaybsan waxay u qaybsan tahay bullaacad dabaq ah oo biyo xidha iyo biyo qoto dheer oo bullaacad ah iyada oo loo eegayo dhererka laalaabka kaydinta biyaha. Markay biyihii kaydinta ku jiray uumi baxaan oo qallalaan, urta qashinku waa soo bixi doonaan.
Markay biyuhu daadaan, culeyska ayaa ku qasbi doona shaabadda inuu jabo, biyuhuna waxay ku laaban doonaan meeshii ay markii hore toogteen ka dib, oo lagu daray naqshadda birlabta ayaa si adag u hayn doonta. Marka la eego hawo-qabasho: T-dheecaanku wuu ka xoog badan yahay U-qulqulka, haddii qashin-qubka dabaqa uu leeyahay ur xun, waxa ugu horreeya ee la tixgelinayaa waa in U-qulqulka uu ka dhammaaday biyaha, oo kaliya waxaad u baahan tahay inaad ku shubto xoogaa biyo ah si looga dhigo hawo.
(1) Mid waa in la beddelaa, haddii shaabadda biyaha bullaacaddu ay tahay 50mm, ama shaabadda dheecaanka dhulka uusan ahayn mid ciriiri ah, ama dhaawacan yahay, ku beddel tayo wanaagsan oo ka sameysan birta birta ah ee birta ah.
(2) Tan labaad, xir, haddii uu jiro farqi u dhexeeya shaabadda biyaha iyo weelka, ku dheji xabagta dhalada si aad u xirto.
(3) jeermiska, ku shub jeermiska kiimikada qolka bullaacadda si uu u milmo hadhaaga sida timaha qubeyska ee qubeyska.
(4) Ku mayr, inta badan baaldi biyo ah, ku shub qashin-qubka dhulka, hadhaaga bullaacaddu waa la dhaqi doonaa, oo waa in la hubiyo in biyuhu biyaha xidhaan.
(5) Hubi daboolka dabaysha ee tuubada bullaacadda saqafka si aad u aragto haddii ay ku xanniban yihiin qashin, iyo haddii ay sidaas tahay, nadiifi.
2, Ilaha Odor:
Maydho Baaqiga Basin
(1) Dhuumaha gaagaaban ee gaaska ayaa si toos ah loogu dhex ridayaa dhulka hoostiisa oo isku xirnaantooda ma xirna, taas oo keeneysa in tuubada dheecaanku ku soo laabato dhadhaminteeda.
(2) Ma jiraan wax leexin biyo ah oo ku jira weelka lagu dhaqo tuubbada hoose ee bullaacadda, taasoo keenta soo noqoshada urta.
(3) Maydhista timaha iyo hadhaaga kale waxay kujiraan darbiga tuubbada udhow laabaadka kaydinta biyaha, way sii xumaataa muddo dheer kadib, samaysanka ur, taasoo keenaysa soo noqoshada urta.
(1) Gali tubbada weelka dhaqda ee gaagaaban ee isku xidha tuubbada bullaacadaha si ay u sameyso shaabad caag ah una xirto kanaalka urta soo noqoshada.
(2) sida weelka lagu dhaqo hoosta tubada qashin qubka ma keydsana laab laab biyo, waxaa lagu badali karaa tuubbo iyo gariiradda, sameysanka qallooca biyaha, xayiraya kanaalka urta soo noqoshada.
(3) in badanaa la nadiifiyo wajiga timaha iyo haraaga kale marka la dhaqaayo, ha u ogolaan inuu ku ag dhawaado foorarka biyaha ee darbiga tuubada.
3, Isha Udgoonka: Musqusha Musqusha (Flange) Musqusha Iyo Isku Xirka Tuubo Bullaacad, Waxaa Jira Shaabad, Sidoo Kale Loo Yaqaano Flange. Qaar badan oo Urka Musqusha ah, Looma Rakibin Sababtoo ah Khatarta Sababta.
(1) Musqusha mar kale ka saar oo dib u xir shaabadda.
(2) Haddii marmarka dhulka ee ku wareegsan musqusha ay banaan yihiin, marka hore dayactir faleebada godka, ka dibna hagaaji isku xirka musqusha iyo taayirrada dhulka.
(3) Musqusha kadib, si dhakhso ah u dabool daboolka musqusha.
(4) inta badan isticmaal biyo si aad u daadisid musqusha, si leexashada biyuhu ugu kaydsanaynin biyo dhintay, biyo xumaaday.
(5) Si joogto ah u isticmaal kiimikada nadiifinta kiimikada (non-acidic) si aad u nadiifiso musqusha.
4, Ilo ur.
Timaha iyo haraaga kale waxay urayaan timaha maydhashada qubayska iyo haraaga kale, ee kuso qulqulaya tuubada bullaacadaha bulaacada ee dhulka, haraaga muddada dheer ee darbiga bullaacadaha, xumaanta iyo urta, taasoo keenta soo noqoshada urta.
(1) Nadiifinta joogtada ah ee haraaga qolka maydhashada.
(2) Jeermis jeermis ah si loo dilo jeermiska xumaaday.
Hore:: Dayactirka Muraayada Musqusha, 99% Dadku wey iska indhatiri doonaan Faahfaahintaan Next: In ka badan 10,000 Hambalyo ah Naqshadaynta Musqusha, Ururinta La Soo Jeediyay!